Andro mafana : Ireo “paozy” tsara hiraisana ara-nofo !
Satria tokony ho fotoana iray mamy ho an’ny mpivady ny firaisana ara-nofo,
Firaisana ara-nofo feno fahafinaretana foana
Tsy voatery ho fantatry ny lehilahy ireo mety hitondra ny vehivavy any amin’ny fahafinaretana fara-tampony. Azo atao kosa anefa ny manoro azy ny tokony atao, mba ho fahafinaretana ho an’ny vehivavy hatrany ny fifampizaràna eny am-pandriana.
Nono sa fitombenana no ankafizin’ny lehilahy ?
Samy manana ny nofinofim-pilàny ny lehilahy rehetra , ka mety samy hanana ny faritra manintona azy avy eny amin’ny vehivavy.
Kitso : ivon-toeran’ny fahafinaretana!
8.000 isa eo ho eo no isan’ny retsika amin’ny kitso. Izany rahateo no mahatonga azy ho taova itoeran’ny fahafineratan’ny vehivavy. Rantsan-tanana fotsiny dia efa ampy hahatakarana izany, raha mahay milalao azy.
Fahafinaretana samy irery : ny marina sy ny diso…
Mbola azo lazaina ho zava-pady ny firesahana izany « masturbation » izany, izay fomba atao hahazoana fahafinaretana ara-nofo samy irery, raha ao anatin’ny fiarahamonina malagasy. Noho izany indrindra dia betsaka koa ny resaka, tsaho sy honohono manodidina azy…
Ny mila jerena voalohany aloha dia ny hoe : sao misy aretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo? Raha toa ka tsy ara-dalàna ilay tsiranoka amin’ny fivaviana, izany hoe: misy fofona, miloko mavomavo na manopy maitsomaitso, mangidihidy sns dia aleo manatona mpitsabo. Manjavona ho azy ny fofona rehefa voatsabo tsara ny aretina.
Raha tsy amin’ilay voatanisa etsy ambony no mahazo anao dia mety ho noho ny fofona tsirinaina tafiditra anatin’ny fivaviana. Misy singa atao hoe “spermine” mantsy ny tsirinaina ka vao mifandray amin’ny singa atao hoe “gardnerella” izay ao anatin’ny fivavian’ny vehivavy dia mamokatra fofona mahery. Toe-javatra ara-dalàna anefa izany, ary tokony ho afaka ho azy.
Misy karazana vehivavy ihany koa anefa mahatsapa fa mamofona ny fivaviany, eny fa na tsy miboridana aza. Io ilay antsoina hoe “dysmorphobie”. Ny saina no tena voa raha ny tena marina, ka mahatonga ilay vehivavy hihevitra fa maimbo ny fivaviany kanefa tsy izany akory, na mankany amin’ny mpitsabo aza. Amin’izay fotoana izay dia aleo manatona “psychiatre” hamahana ny olana satria mety hiteraka sakana eo amin’ny fiainana ara-pananahana izany.